Maritime Services Gweta muDubai UAE | Mutemo Makambani Dubai
Maritime Services Gweta muDubai UAE
Mutemo wekwaMakungwa ibazi rezvemitemo, iro rinoshanda nebhizimusi pamwe chete nekufamba zvinosanganisira kubata hove, kutumira, ngarava, uye mhosva pamvura yakashama.
maritime mutemo waratidza kuve wakakomba
yega yega yemakungwa uye yekuyemura mamiriro ezvinhu
Mitemo yakakosha inoshanda panjodzi dzegungwa dzinoitika pamusoro kana padyo nemvura
MuAUE, maritime chinhu chakakosha pakutengeserana nekutakura rudzi. Inobata nemhando dzese dzekutumira zvinhu muAFA. Magweta eMaritime ane ruzivo uye hunyanzvi mune ye UAE mutemo wemakungwa uye vanogona kukupa iwe mhinduro yakanyanya uye yakakodzera nekukurumidza kuita.
International Maritime Mutemo
Misimboti yemutemo wegungwa muAU yakavakirwa pamutemo weInyika Maritime. Uyezve, ine maitiro akafanana seMaritime Law yevamwe Arabian Gulf Cooperation Council. Mutemo wechiteshi muAU unoshanda muEmirates yeAFA.
Pasi pemutemo we UAE wemakungwa, pazasi pane zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kutaurwa:
Zvigadzirwa zvekutakura zvibvumirano
Kufambisa uye kutakura zvinhu
Kubatwa uye kusungwa kwemidziyo
Mari uye kunyoreswa kwengarava
Umwene uye kunyoreswa kwemidziyo
Kubvumidzwa uye kunyoresa zvikepe zvehove
kunyoreswa kwemidziyo yavo muAFA
Kune mimwe Mitemo Ye Minisitiri nemitemo yemuno kunze kweMaritime Code kana zvasvika pakugadzira, kunyoresa ngarava, uye zvisingabvumirwe pane zviitwa zvekunze-mureza unobata ngarava pamwe nekusagadzwa kwezviitiko zvechiteshi maererano nechikamu chechikamu. Iko kune zvakare kushanda mune wega Emirate.
Hazvigoneke kunyoresa zvikepe muAU pasina zana muzana varidzi vekambani inobata makumi mashanu muzana muzana varidzi neUAE yenyika kana munhu ari UAE wenyika. Kunyoreswa muAFA kuchamiswa kana ngarava dzichitengeswa uye riwane chinzvimbo cheimwe nzvimbo.
Hurumende ye UAE haibvumire varidzi vekunze kuti vanyore kunyoreswa kwemidziyo yavo muAFA. Iyo inogara ichichengetwa muUAE saka muridzi wechikepe anofanirwa kuchengetedza hunhu hweAUE nyika.
Ne UAE magweta ehurumende, iwe haugone kungobuda mudambudziko, asi zvakare, iwe unozove wakadzidziswa nezve kodzero dzako uye nezvemitemo.
Nei Uchifanira Nyanzvi Gweta mune ye UAE yeMaritime Law?
Mutemo wegungwa muUAE wakakwenenzverwa sezvo iine chimwe chezviteshi zvengarava. Paunenge uchishanda muindasitiri yemakungwa yeEmirates, iwe unozoda rubatsiro rwevamiririri vezvikepe vanokwanisa kwazvo nezvematambudziko epamutemo anotarisana nebhizinesi rako.
Nyanzvi dzezvikwata zvemitemo idzo dzakapinda muUSA yemugungwa mutemo unogara pamusoro pezvekuburitsa zvinodiwa nemirairo nemitemo inorairwa muindasitiri ino. Vane zvakare vane hunyanzvi, izvo zvinoita kuti kambani yavo ikwanise kupa vatengi zano rakakodzera pamwe nemutemo masevhisi akavakwa pakutsvagiridza kwakatsanangurwa, makore ehunyanzvi ruzivo, uye kushandira pamwe kwekushanda.
Hunyanzvi uhu hunogonesa magweta ehurumende kuti anokwanisa kupa vatengi mabasa epamutemo epamusoro pane zvese zvine chekuita nezano rekunzvera kweinishuwarenzi, kutumira, uye mari pamwe chete neitigation muUAE. Vakazvipira kukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako mune bhizinesi regungwa zvine hunyanzvi, magweta anopa mabasa epamutemo ehurongwa hwekugadzirisa zviitiko uye zvibvumirano pamwe chete netailing yakazara uye mhinduro dzekupokana.
Professional timu yemagweta anogara akagadzirira kuendesa zvakanyanyisa yakakodzera uye kumusoro-up-zuva zano rezvemitemo kune maritime mutemo kune vatengi vekunze uye emunharaunda vanoita mune indasitiri yeEmirates. Chikamu cheyambiro yemutemo wegungwa muAU inosanganisira kuwonekera kwekushushikana kwepamutemo kunozivikanwa mumuviri wemutemo munyika.
Iko kutarisisa kweavo magweta echikepe akavimbika ndeyekupa yakakwirira mhando sevhisheni nekutarisisa padyo kune yega yevatengi vavo. Paunongoenda kumagweta nezvinetso zvinoenderana nemutemo wegungwa, ivo vanoteerera kunetseka kwako nehungwaru. Yakasanganiswa nekunyatsotsvaga, hunhu uhu hwakanakisa hwe magweta eji anoshanda anoita kuti zano ravo rive rakanyanya kukosha uye pane poindi.
Panyaya yekushandira vatengi muindasitiri yemakungwa, magweta emakungwa anogona kubatsira vatengi vanosangana nematambudziko anotevera:
Kutapurirana kwepasi rose
Shipbuilding inishuwarenzi zvinhu
Affreightment nekubvumidzwa kwechibvumirano mudanho rega rega redare redzimhosva
Kutumira mari uye dambudziko rega riripo rine mhando dzakasiyana dzechikepe
Isu tiri nyanzvi dzematare emakungwa zviitiko, kubva pamvura yekusvibisa pemiti yekushambadzira nekutengesa zvibvumirano. Kukakavanzika kwemakungwa kunosanganisira zvirevo zvekukuvara kwemunhu wega akapihwa nhengo dzevashandi uye vashandi vekumakadzi pamusoro pemamiriro echikepe ane njodzi pavanenge vachitakura nekuregedza ngarava, zvinhanho zvengozi;
Magweta anotungamira echikepe muAFA anodada nekupa mabhizinesi muindasitiri yekutumira kuti vatsvage kururamisira pamwe nekusimbisa kodzero yavo kuburikidza nemazano ezvemutemo akazara uye nemasevhisi.
Vane ruzivo nezvegungwa magweta anonyatsonzwisisa indasitiri yemakungwa inogona kukubatsira iwe kupindura zviri pamutemo kugadzirisa zvese zvako zvegungwa. Magweta aya ane hunyanzvi zvakare kana zvasvika pakunyora marudzi ese ezvibvumirano zvegungwa zvichibva pamutemo wechibvumirano chegungwa.
Tarisana nematambudziko ako emutemo e Maritime Neushingi uye Dana Iwo Akanakisa Maritime Lawyers muAEE!
Ichokwadi chinozivikanwa nechero munhu wese kuti UAE yakakosha yekubvakacha kwechikepe mu Middle East, iyo yaisanganisira inosvika makumi mapfumbamwe muzana ezhinji yekutengeserana kwepasi rese mukufambisa kwemakungwa nekutengesa.
Magweta eMaritime ane ruzivo rwekuti vatengi vavo vanoda mamwe emhando yepamusoro uye neruzivo nyanzvi dzezvemitemo vanogona kupa iwo akanakisisa ezvemitemo masevhisi ane chekuita nechikepe.
Iwo emahara eMitime magweta muAFA anogona kukubatsira kuburikidza nekushambadzira kwakanaka kwechibvumirano saka zvese zvakajeka kwauri. Ivo zvakare vanoziva kutsigira kwakawanda kuri kuitirwa vatengi vekunze nevemuno maererano nenyaya dzezvegungwa.
Chikwata chemagweta ane ruzivo uye anokwanisa echikepe anoshandisa rubatsiro rwematunhu enzvimbo dzekudzidzira uye nyanzvi dzemapoka kukupa iwe zvakanakira zvemutemo zano, masevhisi uye anomiririra zvinogoneka.
Pasinei nenyaya yako yemugungwa kana kunetsekana, iwe unogona kuvimba nekuvimba nekugona kweavo magweta epamhepo akanakisa kana zvasvika pakupa mabasa epamutemo pane zvese zvine chekuita nemutemo wegungwa. Kana uine zvimwe zvinonetsekana nezveimwe yedambudziko rako repamutemo, usazeza kubvunza zano kana kubvunza kubva kumagweta ehurumende. Mamwe emagweta aya zvakare inyanzvi mune mamwe maindasitiri madiki.
Kana iwe uchida rubatsiro nemutemo wekushanya mu UAE, ingo taurirana negweta repamusoro uye uwane kubvunzana uye mamwe masevhisi emutemo aunoda nenyaya yako!
ronga kutaurirana kwekutanga nemumwe we magweta ehurumende ekunze ekunze
Isu takazvipira kushanda zvakananga newe kuti tinzwisise nyaya dzako dzakasiyana